त्यहाँ multicolored घरहरू र विचित्र बारेमा कुरा हो, को को cobbled सडकमा Cremieux सडक कि बनाउन आफ्नो क्यामेरा तल असम्भव राख्दै! यो भव्य पेरिसियन सडक pinks संग लाइन छ, साग, पहेंलो, र ब्लूज, कि अनिवार्य फोटो शूट लागि कुनै पनि outfit मेल गर्न कुनै पनि रंग. को ग्राम लागि यो गर्न, केटाहरु!
Via Toledo एक पुरानो सडक र नेपल्स को शहर मा एक आवश्यक किनमेल गहन मार्ग हो, इटाली. यो 1.2 सडक को किलोमिटर सबैभन्दा सुन्दर स्ट्रिटहरू युरोप मा को छ. यो Piazza डेन्ट मा सुरु र Piazza ट्रियस्टे ई पोर्टो मा समाप्त, Piazza डेल Plebiscito नजिकै.
आइवी घरहरू र एक गोप्य सीढी ढाकिएको. केंसिंग्टन मा Kynance Mews टाढा सबैभन्दा सुन्दर स्ट्रिट्सहरू युरोप मा हो. शरद ऋतुमा, सडक हरियो र बुरगुण्डी पात संग glows, र वसन्त आउँदा, को घरहरू एक बैजनी वन परिणत. लन्डन को यो क्षेत्र स्वर्गमा कुनै पनि ब्लगर गरेको विचार छ!
सेतो पर्खालहरु असंख्य संग लहरै छन्, गेरानियम र carnations भरिएको देहाती फूल बर्तन, शहर यो साँच्चै विशेष भागमा रंग एउटा भव्य पप दिने. यसको संकीर्ण साथ, cobbled तल्ला, ढु arch्गाको आर्चवे, र पक्कै सुन्दर पर्खाल सजावट, को Mezquita गिरजाघर पहिले नै सिद्ध तस्वीर गर्न सही साथै लागि बनाउने पर्खालहरु बीच देखि दृश्य छ.
एक मा टाढा टाढा सानो वर्ग Primrose हिल नजिक, तपाईं युरोपमा सबै भन्दा सुन्दर सडकहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ सबैभन्दा Instagrammable! उच्च खडा गर्ने राम्रो प्यास्टेल townhouses को एक पंक्ति चित्र, सानो वरिपरि curving, हरियो पार्क Chalcot वर्ग छ कि. यो Regents पार्क र प्रसिद्ध क्यामडेन बजार बाट एक ढुङ्गा छ दूर.
टहलने आनन्द एडिनबर्ग cobbled तल भिक्टोरिया सडक मजा भरिएको, अद्वितीय पसलहरूमा, र इंटरनेट एक्सेस. भिक्टोरिया सडक यसको पत्थर पर्खालहरु र सबै भन्दा देखि उमेर-पुराना आगंतुकों आकर्षण आकर्षित संग शहर इतिहास को एक ठोस टुक्रा छ. पक्का 14 औं शताब्दी मा उत्पत्ति र टिप्न स्थानीय उत्पादन र बिट को सबै किसिमका बेच्छ जो Grassmarket तल हिंड्न बनाउन.
Nyhavn चित्र को सही पोर्ट साइड सडक हुन को लागी बक्स टिक्छ कि रंग संग फट्छ, सुखद डुङ्गा masts संग, मीठा क्याफेहरू, र उत्तम दर्जेका रेस्टुरेन्टहरू दुबै तिर. यो शहर शहर मा सबै भन्दा सडक रूपमा साथै कोपेनहेगन गरेको विचित्र वातावरण र HIPSTER अनुभूति दावा. कोपेनहेगन को लागि कुनै यात्रा यहाँ टहल र फोटो बिना पूरा छ.
एक पैदल (वा डुङ्गा सवारी) भेनिस यो सुन्दर सडक तल इन्द्रेणी भ्रमण जस्तै छ. Burano को भेनिस Lagoon बीच एक द्वीप छ, तर तपाईं कहिल्यै भाग्यमानी पर्याप्त छन् भने तपाईंले आफ्नो क्यामेरा हथियाने गरिनेछ भ्रमण गर्न (मोबाइल फोन) तुरुन्तै. सुन्दर नहर सीधा यसलाई माध्यम चलिरहेको संग घरहरू यसलाई enchanting त बनाउन. यो स्थानको प्रकार हो जुन तत्कालको कसैको मुड उठाउन सक्छ.
तल दुनिया-प्रसिद्ध पूर्व साइड ग्यालरी टहलने लिन. वास्तविक खुला हावामा ग्यालरी सडक को बर्लिन पर्खाल को रहलपहल साथ सबै plastered. त्यहाँ Insta अवसर चित्रहरू अविश्वसनीय छ रूपमा यो सडक तल भरिपूर्ण छन्, तर यो पनि बर्लिन इतिहास को एक Chilling सम्झाउने र शीत युद्ध छ.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “10 सबैभन्दा सुन्दर स्ट्रिटहरू युरोप मा अन्वेषण गर्न” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-streets-europe%2F%3Flang%3Dne – (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
यूरोपेस्ट्रेट्स	europetravel	longtrainjourneys	सुन्दर सडकहरू	trainjourney	रेल	रेल सुझावहरू